Residence Umndeni Fun 4 * (iGreece, Rhodes.): Ukubuyekeza, izincazelo kanye nokubuyekeza
Going eholidini, kudingeka babheke kabanzi futhi kuyakhandla indlela kukhethwa resort. Ngeshwa, abaningi bethu akudingeki ngazo zombili ithuba lokuya unyaka wonke, ngakho silindele eziningi iholidi ngempela eside elindelwe. Ezinye izivakashi bekhathele ukuze isifiso sabo kuphela - ukuba endaweni yasezulwini, izungezwe ulwandle, abalale esihlabathini esifudumele, futhi usesimweni sokuba uvume nizifeze zonke lezi zinsuku iholidi laso ehleliwe. Okunye izivakashi uthanda iholidi ngaphezulu asebenzayo, ivulekele konke entsha, ukumvakashela kuyiwe, izintaba. Nokho, iningi lethu kwelinye ukuvakashelwa ufuna ukuhlanganisa iholidi beach futhi indawo. Ngakho lokho isiqondiso ukukhetha? Greece - i yokungcebeleka enhle kakhulu ukuthi ngeke ivumelane eziningi.
Rhodes - resort IsiGreki zonke izimo ezidingekayo ukuze bathole ukuphumula okuhle. amabhishi Endless sandy, ulwandle efudumele futhi ithenda, amahhotela e ezahlukene izigaba intengo, inala ezikhangayo nengqalasizinda. Ngaphezu kwalokho, abaningi Rhodes ngokuthi isiqhingi esihle kakhulu ngesiGreki, egxilile zasemazweni zezitshalo zimila. Yiqiniso, uya Rhodes okokuqala, udinga ukuza ngokuseduze kukhethwa ehhotela. Lapha, ongakhetha yavama: Amahhotela okunethezeka ogwini, futhi ongakhetha isabelomali nesizotha more, izindlu zangasese kanye mini-amahhotela. Sinikeza ongoti bethu, inikezwa Iqophelo liphezulu - Residence Umndeni Fun 4 *. Izibuyekezo Real zezivakashi avunyelwe ukwenza ukubuyekeza umgomo futhi bahlole izimo zokuphila yazo zonke izivakashi ezingaba khona.
Ngakho, IZINDAWO ZOKUHLALA Umndeni Fun 4 * (Ialyssos) - izivakashi eziyinkimbinkimbi, ukhishwa 4 izinkanyezi. It ithatha engxenyeni esenyakatho ye-esentshonalanga yalesi siqhingi futhi 8 kuphela km kusuka emzini Rhodes. Lona uhlobo ebhishi - ulwandle kumane 50 m nhlanganisela eyingqayizivele izihambi, service lihle nenduduzo -. Ukuthi ungakwazi zinganikela lokhu eziyinkimbinkimbi bonke abavakashi.
Ngisho noma ungenayo ukuhlela ukuchitha isikhathi esiningi ekamelweni, ngokuqinisekile unesithakazelo isimo sabo kanye nemishini. Ngakho, inani amakamelo ehhotela Residence Umndeni Fun 4 * ethulwa amakamelo elikhanyayo futhi ivulekile lwezigaba ezahlukene:
30 amakamelo Uphakeme - izinga zokuhlala, angazamukela abantu 2-3;
110 - Comfort isigaba - inombolo, okungase kanyekanye ihlanganise abantu 4.
Igumbi ngalinye has a yokugezela yangasese nge hairdryer nazo zonke yokugezela Izinsiza ezidingekayo, kuhlanganise bathrobes futhi Slippers. Ukuze freshness thunzi ihlangabezana imishini HVAC yesimanje benethuba ukulungiswa ngabanye.
Yenza ibhulakufesi akho, kwasemini noma dinner in the Ikhishi ifakwe isitofu, efrijini mini futhi iqoqo zasendlini. Ngaphezu kwalokho, igumbi ngalinye I Residence Umndeni Fun Ihhotela 4 * ne kuvulandi. Ekuseni, eziningi izivakashi aphethwe ukhululekile Ababazi bakha ifenisha inkomishi yekhofi futhi ujabulele umsindo emadlambini.
Ezinye izivakashi bathi ihhotela Residence Umndeni Fun 4 * (Ialyssos) ngaphandle ubukeka umbukwane kakhulu futhi ziyabukeka ezingaphezu kuka ngaphakathi. Empeleni, kwezinye izindawo komkhondo ukulungiswa fresh, hhayi eliphezulu kakhulu. Ifenisha akuyona entsha, kodwa muhle ngokwanele futhi zikhululekile.
Yiqiniso, zonke izihambeli anakekele ingqalasizinda I Residence Umndeni Fun 4 * (Rhodes). Izibuyekezo zibonisa ukuthi le ndawo iyamangalisa kuso konke okudingayo eholidini: reception, reception, restaurant yayo, "ibha ezintantayo", ichibi amanzi ahlanzekile, kanye izitolo eziningana futhi ezitolo zezinto zezikhumbuzo. Ukuze beshiya isiminyaminya nesiphithiphithi sasemadolobheni uzilungiselele endaweni lounge nge zokungena Inthanethi ne-TV satellite.
Pool libanzi, ukuhlanza nsuku zonke. Ukuze zonke izimenywa ukusetshenziswa sunbeds nezambulela ngasechibini mahhala.
Spa - ukuziqhenya ohlala Okujabulisayo komndeni 4 * Ihhotela. Inama ubuchwepheshe bamuva yesimanje, ngenxa lapho kubonakala khona endaweni ozithandayo ukungcebeleka izivakashi. Kukhona pool zasendlini evuthayo, igumbi massage, futhi lonke uhla beauty zokwelapha.
4 * Ihhotela kufanele kugcizelele nge inkonzo yabo. izihambi eziningi ehhotela Residence Okujabulisayo komndeni 4 wazé, phawula ngezilokotho, kudingeka ukuqapha abayeni abasebenzi. Abanye abahlala ngisho nangaphambi ngesikhathi esibekiwe. Ngiyavuma, ngemva kohambo olukhathazayo ufuna ngokushesha ngangokunokwenzeka ukuze uthole okhiye amakamelo, uhlele izinto, ukushintsha izingubo futhi hamba uye olwandle. Ukuze abasebenzi ehhotela lungatholakala ku yiziphi izinkinga, lapha wena nakanjani asiza ukwenza uhlelo uhambo, ongakhetha isikhathi sabo sokuphumula, kanye emfushane isikhathi kuyoqeda zonke izinkinga.
Manje yokuhlanza amakamelo ehhotela Residence Umndeni Fun 4 *. Ihhotela lithembisa ngemisebenzi emihle, kodwa amakamelo bahlanza ezinjengendle. Kwasithatha isonto lonke uhlale izisebenzi izikhathi ezimbalwa iza. Yokuhlanza kuhlala: ukuze bahlanze amapayipi kanye mopping Kusobala akekho wezwa. Amathawula kanye elinemishwe baguqulelwa zonke izinsuku ezingu-2-3, ngezinye izikhathi kanye kuphela ukuhlala ngayinye. Ukuze 4-ihhotela lezinkanyezi kumane kungamukeleki. Administration ehhotela kuyadingeka ukuqeda le kusimo uma bengafuni ukulahlekelwa izivakashi.
Ihhotela I Residence Family and Fun 4 * (Rhodes) inikeza ukudla, ihlelwe ohlelweni "zonke okufakayo". Zonke izimenywa cuisine elicwengiweyo European futhi kazwelonke ngesiGreki. Sasekuseni, ukudla kwasemini kanye sokudla asizwa yokudlela ehhotela kusistimu "lezitsha". Ibha iziphuzo okungezona notshwala kanye oludakayo ekhona eliphezulu futhi ibanga sasivumela ububanzi.
Ukudla - iphuzu eqinile ehhotela. Ukudla lapha muhle kakhulu: amatafula ngokoqobo "awe phansi" ngokuchichima ukudla - akekho oyobe elambile. Asikho isidingo zokufika kusenesikhathi ukuba ngihlale phansi - amatafula njalo agcwaliswa.
Uya eholidini, ikakhulukazi resort, ngamunye wethu ihlela ukuchitha isikhathi sabo esiningi olwandle. Ngakho, ngingathanda ukwenza kube eduze ngangokunokwenzeka ehhotela.
A okuwuhambo lwemizuzu engu-5 kusukela ehhotela kuyinto sandy beach okukhulu. Ulwandle oluhlanzekile, ngezinye izikhathi ngeke entry emnandi kunazo emanzini - kodwa ngokwanele ukuba kudlule ngisho nasogwini, njengoba inkinga iphele. Kukhona amanzi evulekile futhi iphuzu zokuqasha imishini ezemidlalo, kanye ibha lapho ungakwazi ukujabulela ukudla okululana futhi Ungadla.
Ngokuvamile, ebhishi ahlanzekile anele. Lapha ungakwazi ukuhlangabezana eziningi Imikhaya enezingane ezisencane. Ngaphezu kwalokho, abaningi baphawula ukuthi kubantu kukhona sezulu emnandi, ohelezayo fresh futhi cool eyenza lolwandle iholide umuntu emnandi.
Sekukonke ehhotela I Residence Family and Fun 4 * - kukho okuhle imikhaya. Ihhotela ingenye izindawo amaningi asethuthukile the resort iseduze zonke izingqalasizinda. Yiqiniso, le ndlela akuyona ngaphandle nemiphumela ethile engathandeki, okokuqala kunakho konke, ukungcola emakamelweni, kodwa linikeza izimo ezinhle yokuhlala: namakamelo abanzi, ukudla omuhle kakhulu, insimu ifakwe, ukusondelana kolwandle.
Uma bahlala Rhodes sibheke le ndlela. izivakashi eziningi futhi amaholide kuphawulwe ukuthi lokhu kuhlanganisa olukhulu intengo kanye nekhwalithi amasevisi.
Ihhotela Admiral 5 * (Bulgaria, Golden Sands) Izibuyekezo
Ihhotela St Constantin 5 * (Greece / Crete) izithombe, incazelo, amanani kanye nokubuyekezwa
Marlita Ihhotela Beach Ihhotela Apts 4 (Protaras, Cyprus)
Private ehhotela "Diva", Sudak: kanjani lapho, indawo, ukubuyekezwa
Ukubalwa petrol kanye nezizathu ngobuhlungu bokulahlekelwa kwakhe
Rhabdomyolysis: ukuthi kuyini, kubangela, izimpawu, ukwelapha lesi sifo
Ikusasa namuhla ubuchwepheshe: smartphone Manzi
Nemthombo: indlela ukupheka kahle?
Project ekilasini ikhaya umnotho. izindlu ezishibhile
Ngenxa saqala ukusebenzisa smartphone "Android"?